Istudiyo esinemigangatho ethe cwaka eMancelle Centre Mans - I-Airbnb
Istudiyo esinemigangatho ethe cwaka eMancelle Centre Mans
Isitudiyo esincinci se-20m² e-Le Mans sahlulwe saba yindawo yokuhlala ezimeleyo ezi-2. Kumgangatho ophantsi, kwisitalato esithe cwaka, imizuzu eli-10 ukusuka ePlace de la République, kufutshane netram, imizuzu engama-20 ngeenyawo ukusuka kwisikhululo sikaloliwe (1.8 km).
Kufuphi nesibhedlele (i-1 km), i-15 min ngetram ukusuka kwisekethe ye-Le Mans okanye i-MMA Arena. Ilungele uhambo loshishino / utyelelo Le Mans.Wifi / TV, iitawuli, iishiti, iti, ikofu, iziqholo ezisisiseko eziphilayo, kunye neshampoo.Eco uxanduva indlela consumables.Nayiphi na indawo ebumelwaneni (mini-imarike, yokubhaka, caterer, ilondolo ....).
Ndiye ndavala ngokuzithandela ezinye ze-WE ukuvumela ixesha lokubetha phakathi kweeveki ezi-2. Ukuhlala ngaphezulu kweveki, ungalibazisi ukudibana nam ukuze ndikukhululele ii-WÉs eziyimfuneko.
Indawo ezolileyo, zonke izinto eziluncedo ezikufutshane (indawo yokubhaka, indawo yokuhlamba impahla, iindawo zokutyela, iivenkile ezinkulu, ...) Akukho ngxaki ibonakalayo yokupaka esitratweni. Sizama ukucinga ngentuthuzelo yakho ukuze ukufika kwakho kube lula kunye nezinto eziyimfuneko onazo, kwaye siya kuba sinakho ukuhlangabezana neemfuno zakho kwaye siqhubeke siphucula / siphuhlisa / sihlengahlengise inkonzo yethu kumbulelo kubamkeli bethu.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Le Mans